DRJS ATSINANANA : Vita tanteraka ny asa fanarenana ny biraon’ny tanora sy fanatanjahantena
Anisany fanamby nataon’ny talem-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fanarenana ny biraon’ny Drjs Atsinanana izay eo amin’ny araben’ny fahaleovantena Toamasina no misy azy. 17 octobre 2019
Isan’ny birao tsy mendrika maha biraom-panjakana azy amin’ny araben’ny fahaleovan-tena iny ny biraon’ny tanora sy fanatanjahantena atsinanana teo aloha. Ankehitriny dia tafarina izany birao fiasana izany ary mendrika ny maha biraom-panjakana azy.
Nijery ny birao nasiam-paneranana ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena izay nandalo tao Toamasina ny alatsinainy lasa teo. Nanome tanana tamin’ny fanarenana ity biraon’ny DRJS ity ny seranan-tsambon’i Toamasina, orinasa SMMC, ary ny mpandraharaha Rakoto Jean Paul.
Nisy ny fisaorana nataon’ny talen’ny DRJS Atsinanana ireo orinasa nifanampy taminy tamin’ny fanarenana ny birao izao, izay tao anatin’ny fotoana fohy no nanaovana izany asa izany.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68235) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (402) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (178) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (92) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (84) 21 février 2020